CC Shakuur oo shaaciyay in Farmaajo iyo Fahad Yaasin isku dayeen inay dilaan
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu ka dambeeyay weerarkii gurigiisa lagu qaaday 18-kii bishan, kaasi oo uu sheegay in lala damacsanaa in isaga lagu dilo.
Siyaasigan oo Khamiistii lasoo dhaafay laga sii daayay xabsiga dowladda, ayaa dusha uga tuurey mas'uuliyadda xarigiisa iyo duulaankii lagu qaaday Madaxda sare ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Weerarka oo socday mudo 30 daqiiqo ayuu sheegay in ka qeyb qaateen 5 Askar oo la socday ciidamada NISA, kuwaasi oo si gaar ah loogu xilsaarey inay isaga dilaan, markii ay laayaan Askarta ilaalada u ahayd.
CC Shakuur ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo, Agaasiimaha Madaxtooyadda Fahad Yaasiin iyo Ra'iisul wasaare Khayre ay daqiiqad-daqiiqad ay qadka taleefonka ugala socdeen howlgalka ka socday gurigiisa.
"Farmaajo, Khayre iyo Fahad Yaasin waxa kuwada jireen Raadiyaasha ciidanka waxayna si toos ah ugala socdeen weerarka la igu soo qaadey ee la doonayay in lagu qaarijiyo," ayuu yiri Cabdiraxmaan C/shakuur.
Siyaasigan ayaa shacabka Soomaaliyeed ku wargeliyay in wixii soo gaara hadda kadib loo haysto Madaxweyne Farmaajo iyo Agaasiimaha Villa Soomaaliya Fahad Yaasin, oo xiriir dhaw la leh Qadar.
Wuxuu tilmaamay in markii uu dhibka ku dhacay aysan saddexda mas'uul wax dareen ah ka muujin, balse taasi bedelkeeda ay caga-jugleyn ku hayaan Garsoorkii xukumay in CC Shakuur uu yahay demi la'aanta iyo sii deyntiisa.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhanka kale sheegay inuu maxkamad caalami ah la tiigsanayo Farmaajo, Fahad iyo Khayre duulaankii gardarada ahaa ee ay ku qaadeen gurigiisa, kaasi oo isaga lagu dhaawacay, sidoo kalena lagu dilay 6 kamid ahaa ciidankiisa ilaalad u ah.
Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya oo diidan wadahadalka Muqdisho
Soomaliya 02.11.2017. 21:38
Fahad Yasiin oo dhinaca kale udub dhexaad ka ah khilaafka u dhexeeya...
Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay xariga CC Shakuur
Soomaliya 19.12.2017. 23:34
Soomaaliya: CC Shakuur oo markale Maxkamad lasoo taagay
Soomaliya 21.12.2017. 12:29